Facebook Lite 156.0.0.5.116 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 156.0.0.5.116 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား လူမႈေရး Facebook Lite
Facebook Lite ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတက် Keeping သည့် Facebook ကို Lite ကို app ကိုအတူယခင်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူပါ! ချိတ်ဆက်နှင့်သင့်လူမှုကွန်ယက်နှင့်အတူတက်ထားရန်မိတ်ဆွေများက app ကိုအဖြစ် Facebook က Lite ကိုသုံးပါ။ အဆိုပါ Facebook မှာ Lite ကို app ကိုသင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်အာကာသကယ်တင်နှင့် 2G အခြေအနေများအတွက် Facebook ကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု, သေးငယ်သည်။ Facebook အများ၏ဂန္ထဝင် features တွေအတော်များများဟာထိုကဲ့သို့သောတစ် Timeline ကိုမှမျှဝေဓာတ်ပုံများ like နှိပ်, လူတို့အဘို့ရှာဖွေ, သင်၏ပရိုဖိုင်းနှင့်အုပ်စုများကိုတည်းဖြတ်သည်အတိုင်း, app ကိုအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တိကျတဲ့ features တွေပါဝင်သည်:
& သောနွားထီးတကောင်, မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုရှာပါ
& သောနွားထီးတကောင်, Post ကို status ကိုမွမ်းမံမှုများ & သင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာပေါ်မယ့်အရာကိုထပ်ဆင့်လွှင်ကူညီရန် Facebook ကိုရုပ်ပြောင်ကိုသုံးပါ
& သောနွားထီးတကောင်, ဝေမျှမယ်ဓါတ်ပုံနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု
& သောနွားထီးတကောင်, နှင့်တူသောသူငယ်ချင်းများကိုသင့်ရဲ့ပို့စ်များအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်သည့်အခါအသိပေး Get
& သောနွားထီးတကောင်, ဒေသခံလူမှုရေးဖြစ်ရပ်များ, RSVP ရှာနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူတက်ဖြည့်ဆည်းရန်အစီအစဉ်များလုပ်
& သောနွားထီးတကောင်, သူတို့ရဲ့ Facebook မှာပို့စ်များကိုမှသင့်ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအပြန်အလှန်
& သောနွားထီးတကောင်, ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်မှသူတို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဓာတ်ပုံများ Save
& သောနွားထီးတကောင်, သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းရဖို့ကလူကိုလိုက်နာပါ
& သောနွားထီးတကောင်, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, စစ်ဆင်ရေးနာရီ, နှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ဖို့ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမျှော်
& သောနွားထီးတကောင်, Buy နှင့် Facebook Marketplace တွင်ဒေသအလိုက်ရောင်းချ
အဆိုပါ Facebook မှာ app ကိုသင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေဖို့ကူညီပေးပါထက်ပိုပါဘူး။ ဒါဟာအစ, သိုလှောင်ချွေတာခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေမှုအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစည်းရုံးရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ Android ကင်မရာနဲ့ထံမှဖြောင့်ဓါတ်ပုံဝေမျှဖို့လွယ်ကူပါတယ်, သင်သင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့် privacy setting များကိုကျော်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်ပင်ကမြင်တော်မူသောထိန်းချုပ်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကို set up တစ်ဦးချင်းဓါတ်ပုံကိုစောင့်ရှောက်ရန်အခါသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Facebook က Lite ကိုသင်တို့ကိုလည်းနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလက်ရှိဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူတက်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။ သင့်ရဲ့ Facebook ကို Lite ကို app ၏အဆင်ပြေစေရန်မှမိမိတို့ News Feeds ကိုလိုက်နာရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးနာမည်ကြီးတွေ, အမှတ်တံဆိပ်, ဝက်ဘ်ဆိုက်များ, အနုပညာရှင်, ဒါမှမဟုတ်အားကစားအသင်းများကိုမှ Subscribe!
app ကိုဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ် install လုပ်ပါပြဿနာ? https://www.facebook.com/help/fblite ကိုကြည့်ပါ
သို့တိုင်အကူအညီလိုအပ်? ကိုပြဿနာအကြောင်းပိုမိုပြောပြပေးပါ: https://www.facebook.com/help/contact/640732869364975
Facebook မှာ 13 နှင့်အထက်အသက်ကလူသာရရှိနိုင်ပါသည်။
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: http://m.facebook.com/terms.php
Facebook Lite အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Facebook Lite အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Facebook Lite အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Facebook Lite အား အခ်က္ျပပါ
linuxcentro စတိုး 3.54k 1.04M
Facebook Lite ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Facebook Lite အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 156.0.0.5.116
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.facebook.com/about/privacy/
Release date: 2019-07-18 09:19:10
Facebook Lite APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ